.NET 5 na-abịa na nkwado maka Linux na WebAssembly | Site na Linux
NET 5 biara na Linux na WebAssembly na akwado
E kpughere Microsoft na nso nso a site na blog post, na-ahapụ a isi ọhụrụ version maka. NET 5 n'elu ikpo okwu ihe na-enye nkwado maka Linux, macOS, na WebAssembly.
.NET 5 na-enye ndị ọrụ otu oghere ghe oghe na oge ojiri enwere ike iji ya mee ihe na mpaghara mmepe dị iche iche na nyiwe dị iche iche. Versiondị NET 5 mejuputara njiko nke NET Framework, NET Core and Mono. Na NET 5, ị nwere ike ịmepụta ngwa cross-platform site na iji otu koodu ntọala na usoro ịde ederede, n'agbanyeghị ụdị ngwa.
Ngwaahịa NET 5 gara n'ihu mmepe nke oru mmeghe .NET Core 3.0 ma dochie anya NET Framework kpochapụwo, nke na-agakwaghị emepe iche iche ma kwụsị na ntọhapụ nke NET Framework 4.8. All mmepe metụtara
.NET na-elekwasị anya na NET Core project gụnyere Oge ojiri gaa, JIT, AOT, GC, BCL (Base Class Library), C #, VB.NET, F #, ASP.NET, Entity Framework, ML.NET, WinForms, WPF, na Xamarin. Na ụdị ọzọ nke. NET 6, a ga-etinye ọrụ Xamarin na Mono iji kwado nyiwe iOS na gam akporo.
Dị ka .NET Core, .NET 5 ụgbọ mmiri CoreCLR Oge ojiri gaa na RyuJIT JIT compiler, ọkọlọtọ ọba akwụkwọ, CoreFX, WPF, Windows Forms, WinUI, Entity Framework, dotnet iwu akara interface, usoro maka imepụta ngwa WPF na Windows Forms yana ngwa maka imepụta microservices, ọba akwụkwọ, sava, ihe osise na njikwa.
NET 5.0 bụ nke mbụ dị na njegharị anyị .NET. Anyị kere NET 5.0 iji mee ka ọtụtụ ndị mmepe karịa ka ha kwaga koodu na ngwa ha site na NET Framework na .NET 5.0. Anyị rụkwara ọtụtụ ọrụ izizi na 5.0 ka ndị mmepe Xamarin nwee ike iji ikpo okwu .NET dị n'otu mgbe anyị hapụrụ NET 6.0. Enwere ihe ndị ọzọ na ijikọ .NET mechara na post.
Ugbu a bụ oge dị mma iji gosipụta mmekọrịta dị egwu na onye ọ bụla na-enye aka na ọrụ NET. Ntọhapụ a gosipụtara akara nke ise nke NET dị ka ọrụ mmeghe. Taa enwere ndi mmadu ndi mmadu na ndi obere na nnukwu ulo oru (tinyere ndi na-akwado ulo oru nke .ET NET) na-aru oru dika obodo buru ibu n’akuku di iche iche nke NET na dotnet nzukọ na GitHub. Mgbanwe ndị dị na .NET 5.0 bụ nsonaazụ nke ọtụtụ mmadụ, mbọ ha, echiche ọgụgụ isi, na nlekọta ha na ịhụnanya ha maka ikpo okwu, na-agakarị ntuziaka Microsoft. Site na ndị isi na-arụ ọrụ na .NET kwa ụbọchị, anyị na-agbatị "ekele" nye onye ọ bụla nyere aka na NET 5.0 (na nsụgharị ndị mbụ)!
Na mgbakwunye na mkpokọta JIT, nsụgharị ọhụrụ na-enye LLVM dabere na ọnọdụ precompile maka WebAss Assembly igwe na bytecode (Mono AOT na Blazor eji maka static).
Irụ ọrụ nke ikpo okwu di iche iche na akwukwo akwukwos abawanyela nke ukwuu (ọkachasị ọsọ ọsọ JSON serialization, regex, na ọrụ HttpClient).
Emeziwanye nzaghachi site na imelite onye nchịkọta mkpofu. Wuru na-ClickOnce ahịa maka ngwa ngwa ebipụta. Maka Linux na macOS, sistemụ API. Directory Service.
Emegharịrị usoro ogbugba ndu ka ha rụọ ọrụ na LDAP na Active Directory. Maka Linux, agbakwunyela nkwado maka ngwa otu faịlụ, nke a na-etinye ihe niile na ntụkwasị obi n'otu faịlụ.
A nchịkọta maka ịmepụta ASP.NET Core 5.0 ngwa weebụ na ORM Entity Framework Core 5.0 oyi akwa (ndị ọkwọ ụgbọala, gụnyere maka SQLite na PostgreSQL) wepụtara iche iche, yana nsụgharị asụsụ C # 9 na F # 5. C # 9 gụnyere nkwado maka ndị na-enye koodu ntinye, mmemme dị elu, ndebiri ọhụrụ, na ụdị klaasị ndebanye.
Nkwado maka .NET 5.0 na C # 9 ka etinyelarị na onye editọ ihe nkiri Visual Studio.
N'ikpeazụ, Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọkwa nke. NET 5, can nwere ike ịlele nkọwa na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » NET 5 biara na Linux na WebAssembly na akwado